လောကကြီးကို ပိုကောင်းလာစေချင်ရင် | မေတ္တာရိပ်
← သူ့ဂုဏ်နိမ့်မှ ကိုယ့်ဂုဏ်မြင့်မှာလား
ချစ်တဲ့သူတွေဆီက ရတဲ့ဒဏ်ရာ →
လောကကြီးကို ပိုကောင်းလာစေချင်ရင်	Posted on August 14, 2009	by mettayate လူအများကောင်းရင် ခေတ်ကောင်းမယ်။
တကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့သူတွေများလေ လူလောကမှာ အခက်အခဲတွေ မမျှတမှုတွေ များလေဖြစ်မယ်။
မျှတသော သဘောထားရှိလာအောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကနေစပြီးတော့ ကိုယ့်စိတ်ထားကို မြှင့်တင်ပေးရမယ်။
ကိုယ့်စိတ်မှာ မတရားလောဘဖြစ်နေတာကို မြင်ပြီးတော့ လျှော့နိုင်ရင် ကိုယ့်စိတ်ထားမြင့်လာတယ်။
မတရားလောဘ နည်းသွားတဲ့သူဟာ မျှမျှတတတွေးပြီး အေးအေးဆေးဆေးလုပ်တတ်လို့ စိတ်ချမ်းသာမှု ပိုရတယ်။
တဖတ်သတ် အသာရအောင် မကြိုးစားလို့ ဆွေးနွေးရတာ၊ အပေးအယူလုပ်ရတာ ပိုပြီး ပြေလည်တယ်။
ဒါကြောင့် အများနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာ အများရဲ့ ယုကြည်မှုကို ရတဲ့အတွက် စိတ်ချမ်းသာတယ်၊ စိတ်ပင်ပန်းမှုနည်းတယ်၊ တရားအားထုတ်ရာမှာလည်း ပိုပြီးအဆင်ပြေလာတယ်။
မတရားတာကို လုပ်ဖို့ လုပ်တဲ့သူဟာ စိတ်ပိုပင်ပန်းတယ်။
သူလိုချင်တာ ရရင်တောင်မှ လူတွေနဲ့ ဆက်ဆံရေးဟာ ကျေနပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုး ဖြစ်မလာနိုင်တော့ဘူး။
ခေါင်းစဉ်လေးကို တော်တော်သဘောကျတယ်။ ခေတ်မကောင်းလို့၊ မတရားတဲ့လူတွေများလို့၊ စသဖြင့် အမျိုးမျိုး အဖုံဖုံကြားမြင်နေရတော့ ဒီဟာလေးတွေ့သွားတော့ တော်တော်စိတ်ချမ်းသာတယ်။ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများလည်း ဒီလိုနည်းတွေနဲ့ စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာကြပါစေ။
This entry was posted in ကောက်နှုတ်မှုများ and tagged ဆရာတော် ဦးဇောတိက. Bookmark the permalink.	← သူ့ဂုဏ်နိမ့်မှ ကိုယ့်ဂုဏ်မြင့်မှာလား